दाङका १४ वडामा माओवादी विजयी, कहाँ कसले जिते ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
दाङका १४ वडामा माओवादी विजयी, कहाँ कसले जिते ?
१६ असार २०७४, शुक्रबार ०९:५५ मा प्रकाशित
१६ असार, दाङ
दाङमा शुक्रबार अपराह्नसम्मको मतपरिणाम अनुसार १४ वटा वडाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ९ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रिमबहादुर सुनारी मगर २०१ मतसहित पूरै प्यानल विजयी भएको छ ।
महिला सदस्यमा कुवाँरी देवी कार्की, दलित महिला सदस्य देउकला कामी र सदस्यहरुमा अलि महम्मद मियाँ, दधि बराल विजयी भएका हुन् । यस वडामा कुल मतदाता ५८३ रहेकोमा ४५७ मत खसेको थियो ।
त्यसैगरी गढवा गाउँपालिका वडा नं. २ को अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भक्तु चौधरी विजयी भएका छन् भने चारजनै सदस्यहरु एमालेका विजयी भएका छन् । विजयी चौधरीले ६८१ ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका देउप्रकाश चौधरीले ६६१ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै महिला सदस्यमा मनमाया गुरुङ, दलित महिला सदस्यमा विमला विक र सदस्यहरुमा चन्द्रबहादुर विक र नारायणसिं थापा विजयी भएका छन् । उक्त वडा साविक कोइलाबास गाविसमा पर्दछ । त्यहाँको कुल मतदाता ४९८ रहेकोमा ३४७ मत खसेको थियो ।
राजपुर गाउँपालिका- १, २ र ६ मा माओवादी प्यानल विजयी
त्यस्तै महिला सदस्यमा विमी डाँगी -विमला), दलित महिला सदस्यमा कल्पना विक र सदस्यहरुमा अनन्तबहादुर डाँगी र लुद्रबहादुर केसी विजयी भएका छन् ।
बंगलाचुली-२, ३, ४, ५ र ७ मा माओवादी विजयी